Ikamelo elizimele enkabeni ye-Lleida Capital - I-Airbnb
Ikamelo elizimele enkabeni ye-Lleida Capital
Lleida, Catalunya, i-Spain
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Maria
Ikamelo elizimele e-Centric Flat e-Lleida. Ikamelo elingena umoya futhi elikhanyayo, eline-wifi enejubane eliphakeme, isistimu yokushisisa, ukufinyelela egumbini lokugezela nasekhishini/ekamelweni lokudlela. Ukusetshenziswa komshini wokuwasha nefriji kuvunyelwe ezivakashini ezihlala ubusuku obungu-2 noma ngaphezulu//I-Habitación privada con calefacción e internet inalámbrico, baño completo, bien iluminada y ventilada. Ungasebenzisa igumbi lokugezela nekhishi/igumbi lokudlela, ukusetshenziswa kwefriji nomshini wokuwasha kuvunyelwe ukubhukha kobusuku obungu-2 noma ngaphezulu. Indawo enhle kakhulu.
Ikamelo endaweni esesimweni esihle kakhulu e-Lleida. Isondelene kakhulu nezitolo ezinkulu eziningana, izitobhi zamabhasi, isiteshi sesitimela nendawo yokuthenga yase-Lleida. Kukhona amathilomu amaningi nezindawo zokudlela lapho ungadla khona, amanye ama-discotecs nama-bar amabhuloho ambalwa kude, noma uma ufuna okuthile okunethezekile kakhudlwana phakathi nohambo lwakho, ungavakashela i-La Seu Vella (isikhumbuzo esiyingqophamlando sedolobha) nezinye izindawo eziningi zomlando. Konke kuseduze kakhulu njengoba i- iyidolobha elincane, ngakho-ke ungahamba, uthathe ibhasi noma uhambe ngemoto. ///Ikamelo elisendaweni ephakathi ne-Lleida. Itholakala amamitha ambalwa kusuka kumamakethe amaningana, izitobhi zamabhasi, isiteshi sesitimela kanye nendawo yokuhweba yase-Lleida. Kukhona izinhlobo ezinhle zamathilomu nezindawo zokudlela ongakhetha kuzo, indawo yeklabhu yasebusuku eqhele ngezakhiwo ezimbalwa noma uma ufuna okuthile okuthulile, ungaya emtatsheni wezincwadi, i-La Seu Vella (isikhumbuzo esiyisibonelo se-Lleida) noma ezinye izindawo eziningi. Konke kuseduze ukuze ukwazi ukuhamba ngezinyawo, ngebhasi noma ngemoto yakho.
4.61 out of 5 stars from 152 reviews
4.61 · 152 okushiwo abanye
Ukuthula Kakhulu Sise- Avenue.Prat de la) (Indawo yekilasi eliphakathi
) Eduze nonogada wasedolobheni
Ngiyinhlalakahle kakhulu kodwa futhi ngihlonipha kakhulu ubumfihlo besivakashi ngasinye, ngakho-ke noma iyiphi indlela izoba yinhle kimi, uma ufuna ukuhlanganyela noma ukuphumula ekamelweni lakho phakathi nokuhlala kwakho. Ngitholakala ukuze nginokungabaza noma isimo esiphuthumayo nge-sms, umakhalekhukhwini, nge-imeyili noma nge-app ye-hats. Uma ngingekho ekhaya, kuhlala kukhona umuntu ongakusiza kunoma yini ongayidinga.//
Ngingumuntu wezenhlalo, kodwa futhi ngihlonipha kakhulu ubumfihlo babantu, ngakho-ke noma yiziphi izinketho isivakashi ezikhethayo zilungile kimi. Ngitholakala ukucacisa imibuzo ngomyalezo, ucingo, i-imeyili noma i-whatsapp. Uma ngingekho ekhaya nganoma isiphi isikhathi, kuzohlala kunothile lapha ozokusiza nganoma yini oyidingayo.
Ngiyinhlalakahle kakhulu kodwa futhi ngihlonipha kakhulu ubumfihlo besivakashi ngasinye, ngakho-ke noma iyiphi indlela izoba yinhle kimi, uma ufuna ukuhlanganyela noma ukuphumula e…
Ngena: 21:00 - 00:00
Hlola ezinye izinketho ezise- Lleida namaphethelo